Nhau - Diamond Zvishongo Musika, kukwikwidza pakati pehunyanzvi uye kudanana
Zvimwe Zvizhinji Zvinoenda Kwedu Alibaba: https: //maijiao.en.alibaba.com
24 ROW RINOKOSHESA MESH
24 ROW RHINESTONE MESH PASINA RHINESTONE
MAPURASTIKI MABHUKU MAZVIVO
SEW PANE ZVINHU
Diamond Zvishongo Musika, kukwikwidza pakati pehunyanzvi uye kudanana
Dhiamondi dzakagadzirwa nemaoko dzakaonekwa kare kuma1950. Zvisinei, kusvikira nguva pfupi yapfuura, mitengo yekugadzira yekurima mangoda yakatanga kudzikira zvakanyanya kupfuura mutengo wemadhaimani ekuchera.
Kufambira mberi kwesainzi uye tekinoroji kwadzikisa zvakanyanya mitengo yekugadzira yemadhayamondi anogadzirwa murabhoritari. Muzhinji, mutengo wekurima madhaimondi uri 30% kusvika 40% yakaderera pane mutengo wemadhaimani emigodhi. Makwikwi aya, ndiani achave anokunda wekupedzisira? Ndiyo mangoda ekuchera ayo akaumbwa pasi penyika, kana kurimwa kwemadhaimani akagadzirwa nehunyanzvi?
Irabhoritari inorima mangoda uye mangoda emigodhi ane zvakafanana zvinhu zvepanyama, zvemakemikari, uye zvemaziso uye zvinotaridzika zvakafanana nemadhaimani emigodhi. Mumamiriro ekushisa akakwirira zvakanyanya uye akakomberedza kumanikidza, marabhosi anovandudza madhaimani kutevedzera nhanho dzemadhaimani ekuchera, achikura kubva pambeu diki yedhaimondi kuita madhaimani mahombe Zvinotora mavhiki mashoma chete kugadzira dhayamondi murabhoritari. Kunyangwe iyo nguva yekuchera mangoda ingangoita zvakafanana, iyo nguva yakatora kuumba pasi peadhayamondi yakadzokera kumashure mazana emamiriyoni emakore.
Kurimwa kwemadhaimani achiri mudiki mumusika wekutengesa matombo.
Maererano nezvakataurwa naMorgan Stanley Investment Company, kutengesa kwakaipa kwemadhaimondi akagadzirwa murabhoritari kwakatangira pamamirioni makumi manomwe neshanu kusvika pamamirioni mazana maviri emadhora ekuAmerica, chinova chikamu chimwe chete kubva muzana chekutengeswa kwepasi rose kwemangoda emadhora. Nekudaro, muna 2020, Morgan Stanley anotarisira kuti marabhoritari-anogadzira madhayamondi anotengesa zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zvemusika wemadhaimani madiki (0.18 kana pasi) uye 7.5% yemadhaimani makuru (0.18-carats uye pamusoro).
Kugadzirwa kwemadhaimani akarimwa zvakare kudiki kwazvo pari zvino. Sekureva kwedata kubva kuFrost & Sullivan Consulting, kugadzirwa kwemadhaimani mugore ra2014 kwaingova makarati mazana matatu nemakumi matatu, asi kuburitswa kwemadhaimani kwaive nemamota gumi nemazana gumi nematanhatu. Kambani yekuongorora inotarisira kuti kudiwa kwevatengi kwematombo anokosha-kudhura kuchasimudzira kugadzirwa kwemadhaimani akakwidzwa kumamirioni makumi maviri muna 2018, uye panosvika 2026 ichawedzera kusvika kumamirioni makumi maviri emakarati.
CARAXY Diamond Technology ndiyo piyona mumusika wepamusha wekurima mangoda uyezve inhengo yekutanga yeIGDA (International Association for the Kulima kweMadhaimani) kuita bhizinesi kuChina. VaGoo Sheng, CEO wekambani iyi, vane tarisiro nezveramangwana rekusimudzira kurimwa kwemadhaimani.
Kubva kutanga kwebhizimusi muna 2015, CARAXY's murabhoritari-inogadzirwa madhayamondi kutengesa kwakapetwa katatu mukutengesa kwegore.
CARAXY inokwanisa kurima mangoda machena, yero madhaimani, yeblue mangoda uye epingi mangoda. Parizvino, CARAXY iri kuyedza kurima mangoda egirini nepepuru. Mazhinji madhayamondi akura mumarabhoramu mumusika weChinese ari pasi pe0.0 carat, asi CARAXY inotengesa madhaimani anokwanisa kusvika mashanu makarati ewhite, yero, bhuruu uye 2-carat mangoda.
Guo Sheng anotenda kuti budiriro muhunyanzvi inogona kuputsa miganho yedhaimani kukura uye ruvara, ichideredza mutengo wekucheka madhaimani, kuitira kuti vatengi vazhinji vagone kunakidzwa kwemadhaimani.
Kukwikwidzana pakati penyaya dzerudo netekinoroji kwanyanya kuwedzera. Vatengesi vematombo anokosha ekugadzira zvinhu vanoramba vachinyunyuta kune vatengi kuti kushandiswa kwemadhaimani kwakonzera kukuvadza kukuru kune zvakatipoteredza, pamwe nenyaya dzetsika dzakabatanidzwa mu "madhaimani eropa."
Diamond Foundry, kambani inotangisa mangoda muUnited States, inoti zvigadzirwa zvayo "zvakavimbika seyako tsika." Leonardo DiCaprio (Little Plum), uyo akatamba nyeredzi mumuvhi ra2006 reropa reDiamonds, aive mumwe wevatengesi mukambani iyi.
Muna 2015, makambani manomwe epasi rese ekuchera madhaimani akatanga DPA (Sangano reVagadziri vemadhaimani) Muna 2016, vakaparura mushandirapamwe unonzi "Real is rare. Kazhinji idhaimondi. ”
Kuchera mangoda hofori De Beers anoverenga chetatu chekutengesa kwepasirese, uye hofori haina tariro nezvema dhayamondi ekugadzira. Jonathan Kendall, sachigaro weDe Beers International Diamond Grading and Research Institute, akati: “Takaita ongororo yakawanda yevatengi pasirese uye hatina kuona kuti vatengi vanoda madhaimani ekugadzira. Vaida mangoda echisikigo. . ”
”Kana ndikakupa dhaimani rekugadzira ndikati 'ndinokuda' kwauri, hauzobatika. MaDayimani ekugadzira akadhura, anotsamwisa, haagone kuratidza chero manzwiro, uye haatombogoni kuratidza kuti ndinokuda. ” Kendall akawedzera Mugwagwa.
Nicolas Bos, sachigaro uye CEO weFrance mutengesi Van Cleef & Arpels, vakati kugadzirwa kwaVan Cleef & Arpels hakuzomboshandisa madhayamondi ekugadzira. Nicolas Bos akataura kuti tsika yaVan Cleef & Arpels ndeyekushandisa chete zviwanikwa zvemigodhi, uye izvo "zvakakosha" zvinotsigirwa nemapoka evatengi hazvisi izvo murabhoritari inorima mangoda.
Anonymous banker webhanga rekudyara mhiri kwemakungwa rinotarisira kubatanidzwa pamwe nekutenga zvakataurwa mubvunzurudzo neChina Daily kuti nekuchinja kusingaperi kwemifungo yekushandisa kwevanhu nekurasikirwa zvishoma nezvishoma kwerunako rwe "dhayamondi rinogara kwenguva refu", mangoda ekudyarwa ramba uchisimuka. Nekuti madhaimani akarimwa zvakagadzirwa uye madhaimani akacherwa echisikigo zvakangofanana pakuonekwa, vatengi vanokwezvwa nemitengo inodhura yemadhaimani akarimwa.
Zvisinei, mubhengi anotenda kuti kushandiswa kwemadhaimani kunogona kuve kwakakodzera kudyara, nekuti kudzikira kwemadhaimani emangoda kunokonzera kuti mitengo yawo ikwire zvichiramba. Makuru-carat madhaimani uye epamusoro-grade madhayamondi mashoma ishoma ave kuve mwoyo yevanhu vakapfuma uye ane hukuru hukuru hwekudyara. Iye anotenda kuti murabhoritari kurimwa kwemadhaimani kunowedzera kwekuwedzera kumusika wevatengi vakawanda.
Tsvagiridzo inofungidzira kuti kuburitswa kwemadhaimani akacherwa kuchakwira muna 2018 kana 2019, mushure meizvozvo kugadzirwa kuchaderera zvishoma nezvishoma.
Kendall anoti dhayamondi yeDe Beers inogona kutsigira "makumi mashoma emakore", uye kuti zvakaoma zvikuru kuwana mugodhi mutsva mukuru wedhaimani.
Guo Sheng anotenda kuti nekuda kwekunakidzwa kwevatengi.
Kana matombo ekugadzira ari kutengeswa nezvinhu zvakasikwa mumatombo echisikigo, iwo kupisa kwemusika unokwira wematombo enhema anokanganisawo vatengi.
De Beers akaisa mari yakawanda mu tekinoroji yekuongorora tekinoroji. Chishandiso chayo chazvino chidiki chekuongorora madhaimani, AMS2, ichave ichiwanikwa muna Chikumi. Iyo yakatangira AMS2 haina kukwanisa kuona madhaimani asingasviki 0.01 carat, uye AMS2 yakaita kuti zvikwanise kuona madhaimani madiki angangoita makarati e0503.
Kuti usiyane nemadhayamondi ekuchera, zvigadzirwa zveCARAXY zvese zvinonzi zvakasimwa murabhoritari. Vaviri Kendall naGoo Sheng vanotenda kuti zvakakosha kuchengetedza nekusimudzira kuvimba kwevatengi mumusika kuitira kuti vatengi vezvishongo vazive mhando yemadhaimani avari kutenga pamutengo mukuru.
Post nguva: Jul-02-2018
Adress:Dzimbahwe: Kwete. 16, Waidaling, Daling Village, Yisanli Street, Yiwu Guta, Zhejiang Province, China
Nhare Yemahara: 0086 13958400086